Ukulala ubusuku kwigadi yesikhova Unxibelelwano lokungena - I-Airbnb
Ukulala ubusuku kwigadi yesikhova Unxibelelwano lokungena
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguElke
Embindini oluhlaza, sinika igumbi le-15 m² elinekhitshi elincinci kunye negumbi lokuhlambela.
Ngombulelo kumnyango ohlukeneyo, ukuhlala ixesha elide kunokwenzeka. B. kunokwenzeka kubalinganisi.
Indawo yokuhlala ikwadume ngabakhweli beebhayisikile. Nendawo yokugcina iibhayisekile.
Ilinen yokulala, iitawuli, i-WiFi kunye nebhotile ye-1. Amanzi afakiwe. I-pool yegadi ingasetyenziswa ngokucwangciswa. i-sauna iyahlawuliswa
Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga emagumbini kwaye ke ngoko zikwafanele abantu abakwaliwayo.
Wamkelekile kwisixeko sethu esiluhlaza kwi-Havel.
Ewe, sifakwe kwindawo eqhelekileyo yeBrandenburg. Indawo esingqongileyo ibonakala ngamahlathi anzulu kunye namachibi amahle amaninzi.
Kude kude nathi isilwanyana, ukuzonwabisa kunye nepaki ye-prehistoric Germendorf, i-Oranienburger Schloss, i-castle park kunye ne-orangery. Yintoni efihliweyo emva kwayo, izinto ezibonwayo, iimbalasane kunye neziganeko zenkcubeko zinokufumaneka phantsi kwe "Oranienburg-erleben.de" kwaye phantsi "kwekhalenda yesiganeko iLand Brandenburg", kodwa iBerlin ayikho kude.
Embindini oluhlaza kwaye kude kwingxolo yedolophu, sinikezela ngeendwendwe zethu amagumbi amabini amnandi eholide kwigadi yesikhova yase-Eden.
I-EDEN, leyo “lithanga lokuqala labatya imifuno eJamani, elasekwa ngowe-1893, yaba sisihlandlo sokuqala ukuba kwaveliswa iindlela ezizezinye zobomi bendalo nobusempilweni, kwaza kwamiselwa iziseko zeevenkile zokutya okusempilweni nokutya kwemvelo.
Kwindawo yentsebenziswano yanamhlanje, ukuhamba nje okufutshane ukusuka kwipropati yethu, kukho imiboniso, i-Eden café kunye nomdwebi uWilhelm Groß, owayehlala apha kunye nentsapho yakhe, ushiye uphawu lwakhe.
Kuninzi okufumanayo, vumela ukuba umangaliswe okanye ucime nje kwaye wonwabele uxolo kunye nokuzola.
Indawo yethu yokuqala epholileyo yeholide, "i-Oasis of well-being with charm" ixhotyiswe ngabo bonke ubutofotofo kwaye ikulungele ukuhlala ixesha elide. Iibhedi ezongezelelweyo zinokwenzeka. Iindwendwe ezinabantwana nazo zamkelekile.
Indlu yesibini yeyabantu ukuya kutsho kwi-2. Igumbi elimalunga ne-15 m² - elincinci kodwa lihle - elinekhitshi elincinci kunye negumbi lokuhlambela labucala linika abakhweli beebhayisikile nabakhandi ngokukodwa uphahla phezu kweentloko zabo.
Zombini ezi zindlu zineendawo zokungena ezihlukeneyo kwaye zikwafanele ukuhlala ixesha elide.
Phambi kwazo zombini kukho iterras eyahlukileyo yosetyenziso olungaphazanyiswayo lweendwendwe zethu.
I-pool yegadi kunye ne-sauna ingasetyenziswa ngokucwangciswa.
Kukho iindleko ezongezelelweyo zesauna.
Singabonelela ngebhedi kunye nesitulo esiphezulu kubantwana abancinci abahamba nawe.
Ilinen yokulala kunye neetawuli zizinto ezisisiseko. Okwangoku, ikofu, iti, amanzi kunye neebhiskithi zikhoyo
4.85 · Izimvo eziyi-188
Isitiya sethu sise-Eden, eyona ntsebenziswano indala eJamani. Kulapho kwavela khona intshukumo yemifuno kunye nohlaziyo. Umgama nje omfutshane ukusuka kwisakhiwo esidala sentsebenziswano ngumboniso onika umdla ovulwa ngeeCawe.
Kwidolophu encinci eselumelwaneni yaseGermendorf, isilwanyana, idayinaso kunye nepaki yokuzonwabisa ikumema ukuba undwendwele.
Wir teilen unser kleines Paradies in Eden
Passionierte Gartenliebhaberin mit Vorliebe für alles Schöne lebt mit ihrem Mann, einem begeisterten Gärtner, Imker und Züchter von Papageien, Eulen und vielen anderen Vögeln in einem traumhaften Garten.
Passionierte Gartenliebhaberin mit Vorliebe für alles Schöne lebt mit ihrem Mann, einem be…
Imfihlo yeendwendwe zethu ibaluleke kakhulu kuthi. Undwendwe luzimele ngokwalo kwaye, ngaphandle kohambo lomamkeli-zindwendwe egadini yakhe, akufunekanga lubone nantoni na evela kumamkeli-ndwendwe, ekulula ukufikelela kuwo ukuba unemibuzo.
Ngokuxhomekeke kwixesha, iziqhamo ezitsha, imifuno kunye nemifuno evela egadini ikumema ukuba udle. Iijam ezenziwe ekhaya, ubusi kunye namaqanda zinikezelwa ngovuyo ngokuxhomekeke ekufumanekeni.
Imfihlo yeendwendwe zethu ibaluleke kakhulu kuthi. Undwendwe luzimele ngokwalo kwaye, ngaphandle kohambo lomamkeli-zindwendwe egadini yakhe, akufunekanga lubone nantoni na evela ku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oranienburg